Xulka Qaranka Croatia oo Taariikhda Markii Ugu Horeeysay U Soo Baxay Finalka Koobka Aduunka | WAJAALE NEWS
Hargeysa (WJN)- Xulka qaranka Croatia ayaa markii ugu horaysay taariikhdiisa u soo baxay finalka koobka aduunka kadib markii ay 2-1 kaga adkaadeen England. Inkasta oo xulka England uu hogaanka ciyaarta hayay min daqiiqadii 5 aad ee bilawgii kulankan ilaa daqiiqadii 68 aad intii laga soo gaadhayay haddana qaybtii labaad ee kulankan ayuu Perisic xulkiisa ciyaarta dib ugu soo celiyay.
Labada xul ayaa ku kala bixi waayay wakhtigii rasmiga ahaa taas oo keentay in 30 daqiiqo oo dheeri ah lagu daray waxayna Croatia wakhtigan dhamaadkiisii ku keensadeen goolka ay guusha soo laabashada ah kaga gaadheen Three Lions.
DAQIIQADII 5 AAD Xulka qaranka England ayaa markiiba helay goolkooda furitaanka oo waliba ahaa mid cajiib ah kaas oo uu difaaca Kieran Trippier ku dhaliyay kubbad laaga xorta ah oo uu ka soo tuuray meel ka baxsanayd xerada ganaaxa Craotia isaga si buuxda u garaacay goolhaye Subasic waxayna ciyaartu noqotay 1-0 ay markiiba Three Lions hogaanka ciyaarta kula wareegeen.
Xulka Croatia ayaa bilaabay in ay ka dagaalamaan goolka waxayna u muuqdeen kuwo aan jabin karin difaaca birta noqday ee xulka England kaas oo isbadal layaableh uu ku sameeyay Garth Southgate.
DAQIIQADII 29 AAD Harry Kane ayaa ku dhawaaday in uu England u keeno goolka labaad laakiin waxaa fursad fiican ka beeniyay goolhaye Subasic laakiin laba daqiiqo oo kaliya kadib Croatia ayaa markeeda heshay fursad halis ah iyada oo Rebic uu goolhaye Pickfor oo badbaadin sameeyay.
DAQIIQADII 68 AAD Croatia ayaa ugu danbayn heshay goolka ay wakhtiga dheer soo raadinaysay waxaana goolka Croatia u dhaliyay Ivan Perišić kaas oo kubbad karoos aad u fiican ah ka helay Šime Vrsaljko wuxuuna Perisic awooday in Walker oo kubbada madax ku saari lahaa uu lugta kaga horqaatay si uu u dhaliyo goolkan waxayna ciyaartu noqotay barbaro 1-1 ah.
DAQIIQADII 70 AAD Xulka Croatia ayaa ugu dhawaaday in ay gabi ahaanba ciyaarta dhinaca kale u dhigaan kadib markii uu Stones ku fashilmay in uu kubbad iska saaro waxaana goolka labaad laba daqiiqo gudahooda Croatia ugu dhalin gaadhay Perisic.
DAQIIQADII 82 AAD Croatia ayaa heshay fursad ay hogaanka ciyaarta kula wareegi kartay wakhti xaasaasi ah kadib markii ay si fiican iskugu xidhmeen Mandzukic iyo Brozovic laakiin goolhaye Jordan Pickford ayaa awooday in uu gool badbaadin wayn sameeyo.
Si kastaba ha ahaatee, wakhtigii rasmiga ahaa ee 90 ka daqiiqo iyo waliba 3 daqiiqo oo dheeri ahaa oo ciyaarta lagu daray waxay England iyo Croatia isku mari waayeen barbaro 1-1 ah taas oo keentay in 30 daqiiqo oo wakhti dheeri ah ciyaarta lagu daray.
WAKHTIGA DHEERIGA AH:
DAQIIQADII 107 AAD Croatia ayaa markeeda heshay fursad ay ciyaarta ugu guulaysan kartay kadib marii uu Mandzukic uu kubbad cajiib ah ka helay Perisic laakiin goolhaye Jordan Pickford ayaa xulkiisa gool cadaan ah ka badbaadiyay.
Ismari waaga ciyaarta ayaa wali sii socda iyada oo 15 kii daqiiqo ee wakhtiga dheeriga ah markale lagu kala nastay barbaro 1-1 ah waxayna labada xul markan haysteen 15 daqiiqo oo kaliya si ay guul u gaadhaan ama ay rekoodhayaal u tagto ciyaarto.
DAQIIQADII 109 AAD Croatia ayaa markeeda heshay goolka labaad ee ay xaalada ugu xumaysay England kadib markii uu difaaca Three Lions qalad wayn sameeyay ee uu Perisic kubbad madax ah ku caawiyay Mario Mandžukić kaas oo si degan kubbada u dhaafiyay goolhaye Pickford waxayna ciyaartu noqotay 2-1 ay Croatia dhinaca kale ugu dhigtay natiijadii ciyaarta ee goolka wakhtiga dheer hogaanka looga hayay.
DAQIIQADII 112 AAD Jamie Vardy ayaa lagu soo xoojiyay weearka England waxaana la saaray Kyle Walker maadama oo ayna jirin wax ay difaacdaan waxayna England bilawday in ay wakhtiga kooban ee u hadhsanaa raadiso goolka barbaraha.
Croatia ayaa finalka koobka aduunka la ciyaari doona xulka qaranka France oo xalay u soo baxay kadib markii ay Belgium.